Somaliland: Jewiga Madal Ay Il-Yartu Is Qabatay Oo Lagu Daah-Furay Adeegyada Baanka Premier Bank Iyo Dulucda Khudbadihii Laga Jeediyey Wanqashiisa+Sawiro | Maalmahanews
Somaliland: Jewiga Madal Ay Il-Yartu Is Qabatay Oo Lagu Daah-Furay Adeegyada Baanka Premier Bank Iyo Dulucda Khudbadihii Laga Jeediyey Wanqashiisa+Sawiro
Hargeysa(Maalimaha)May.25,2017-Daah-furka munaasibad loogu wanqalayay bangiga caalamiga ah ee Premier Bank, ayaa Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Seylici) si rasmi ah xadhiga uga jaray maalintii shalay lagu qabtay xarunta dhexe ee baankaas ee magaallada Hargeysa.
Daah furka bangigan oo ay ka soo qaybgaleen mas’uuliyiin kala duwan oo ka kala socday hay’adaha dawladda, bangiyada gaarka loo leeyahay ee Somaliland ka hawlgala, ganacsato, aqoonyahan, qaar ka mid ah shirkada is-gaadhsiinta iyo maamulka iyo hawl-wadeennada Baanka cusub ee Premier Bank, ayaa lagu soo bandhigay adeegyada kala duwan ee uu bangigani bixin doono, kuwaasoo isugu jira qaar hore uga jiray dalka iyo kuwo cusub oo aan hore u jirin oo ay soo kordhiyeen.
Geesta kale, war-murtiyeedka lagu sharraxay himillooyinka u degsan iyo ujeedooyinka ay hiigsanayaan ayaa u qornaa sidan: “Himilada Premier Bank waa inuu noqdo hormuudka bangiyada. Hadafka koowaad ee Premier Bank waa in uu ka jawaabo baahiyaha maaliyadeed ee bulshada Somaliland si uu qayb laxaad leh uga qaato horumar-ka dhaqaale ee dalka. Waxa tilmaan u ah Premier Bank adeeg hufan oo danta macmiilku udub-dhexaad u tahay. Adeegyada uu baanku bixiyaa waa kuwo haqab-tiraya baahiyaha maaliyadeed ee dadweynaha iyo ganacsatada. Waxa adeegyadaas ka mid ah furirtaanka xisaabaha socda, xisaabaha kaydsan iyo xisaabaha maalgelinta. Waxa kale oo uu bangigu qabtaa adeegyada lacag dirista, waxa uu bixiyaa warqadaha dammaanadaha, waxa uu muddo dhawna ganacsatada u furi doonaa LC-yo. Waxa macmiilka Premier Bank uu awood u leeyahay in uu xisaabihiisa lacag kala bixi karo goob kasta oo aduunka ah iyo goor kasta, isaga oo adeegsanaya kaadhka Premier Bank. Waxa uu markii koowaad Premier Bank suurta geliyey in macmiilka Somaliland joogaa internet-ka ka iibsan karo badeecadaha iyo adeegyada uu u baahan yahay isaga oo aan cid kale culays saarin. Waxa uu baanku soo kordhiyey adeegga loo yaqaanno POS-ka oo ka fududeynaya in uu macmiilku jeebka lacag ku qaato uu wax ku iibsado,” ayaa lagu soo gebogabeeyey war-murtiyeedka bangigu soo saaray kaasoo lagu xusay maamuuska ay hawl-wadeennada bangigu yeelanayaan, maadaama oo lagu tilmaamay laf-dhabarta baanka.
“Bangigan markii la aasaasayay waxaa culimo ahaan nala soo xidhiidhay Axmed Cabdiraxmaan Sh. Bashiir, waxaannu noo soo bandhigay qaabka ama nidaamka uu u shaqayn doono bangigu, isaga oo culimo ahaan naga codsaday in aannu saxno oo wixii shareecada waafaqsanna aanu u oggolaano, wixii khilaafsanna aanu ka reebno,” ayuu yidhi Sh. Cismaan Cali Xuseen oo ka mid ah culimaa’udiinta dalka ee xafladda wanqasha bangigan Premier lagu soo marti qaaday, isaga oo sheekhu khudbad iftiiminaysa qaabka ay isu waafaqayaan adeega uu bangigani bixinayo iyo nidaamka ganacsi ee islaamka ku shaqaynayo, waxaanna khudbada uu sheekhu madasha ka jeediyey oo is waafajinta labadaaasi arrimood u badnayd uu intaasi ku daray, “Nidaamkan uu bangigu ku shaqaynayo annaga ayaa culimo ahaan u saxnay, waana nidaam shareecada waafaqsan. Sideedaba waxa aynu wada ognahay in dhaqaalaha islaamiga ahi uu ku dhisan yahay mabda’ aan guurguurin oo ah in qofkamuslimka ahi uu isla ilaaliyo maalka xaaraanta ah ee aanu lahayn, qofku in uu ganacsadana Illaahay baa banneeyey, laakiin waxa dhici karaysa in dadkeena uu magaca bangigani ku yara adkaado marka ay maqlaan ama arkaan Premier Bank oo ay is yidhaahdaan bahalka wax kale ayaa malaha ku hoos jira, hase yeeshee magacu asalkiisaba macno ma samaynayo ee waxaa muhiim ah uun nidaamka uu ku shaqaynayo. Markaa waxaan idin leeyahay bangigu khadkii aannu ujeexnay ayuu ku shaqaynayaa culimadii nidaamka u saxdayna ka mid baan ahay, Illaahay idamkiina waxaan rejaynayaa in sidii aannu u tilmaanay iyo qorshihii aanu u waafajinay shareecadana in ay u shaqayn doonaan Insha Allah.”